ကိုယ့်လိုင်စောင်းနိန်စွာကို ဇာပိုင် ပြင်ဖို့လဲ | Great Arakan
Home Health ကိုယ့်လိုင်စောင်းနိန်စွာကို ဇာပိုင် ပြင်ဖို့လဲ
Source: Samsung Health
နိတိုင်းနိတိုင်း မိုးသောက်ကပင် နီတဝင်ထိ၊ ကင်ပျူတာနန့် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းနန့် ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်များနိန်ကတ်တေ လူတိ၊ ကိုယ့်လိုင် အနိန်အထားကို သတိထားဖို့ လိုပါရေ။ ကိုယ့်စွာကို သတိမထားမိကေ၊ လဒငှက်တိပိုင် ဂေါင်း ရှိကို ငိုက်စိုက်ကျလားရေ အနိန်အထား ရောက်လားနိုင်ပါရေ။ ယင်းကိုယ်ဟန်အနိန်အထားကို အင်္ဂလိပ်တိမှာ “Text Neck” (ဝါ) “စာရိုက်တေ လိုင်” လို့ ခေါ်ကတ်ပါရေ။
စာရိုက်တေ လိုင် ဇာဖြစ်လို့ ဖြစ်ရလေ?
လူတယောက်ဂေါင်းစွာ ခန္ဓာကိုယ်ထက်မှာ တတည့်မမတ် ရှိနိန်ရေအချိန်၊ ယေဘုယျ အလီးချိန် ၅ ကီလိုဂရမ် လောက် ရှိပါရေ။ ယကေလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကနိန် ဂေါင်း ရှိကို ငိုက်ကျလီ၊ အလီးချိန် ပိုများလာလီပါ။ ရှိကိုရာ ကကောင်းကြီး ငိုက်ကျနိန်ဖို့ဆိုကေ ၂၂ ကီလိုဂရမ် လောက်ထိ လီးလားနိုင်ပါရေ။
ခန္ဓာကိုယ်ကနိန် ဂေါင်း ရှိကို ငိုက်ကျလီ၊ အလီးချိန် ပိုများလာလီဆိုစွာကို အရောင်နန့် ပြထားပုံ
(တတည့် (အစိမ်းရောင်) ၅ ကီလိုဂရမ် လီး၊ ၂၀ ဒီဂရီအစောင်း (အဝါရောင်) ၁၂ ကီလိုဂရမ် လီး၊ ၃၅ ဒီဂရီအစောင်း (အနီရောင်) ၂၂ ကီလိုဂရမ် လီး)
ကြာလာကေ လိုင်ဆစ်တိနန့် နောက်ကုန်းရိုးတိမှာ ဒဏ်ဖြစ်လားတတ်ပါရေ။ တချို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရလားရေ လူတိမှာ၊ နောက်ကုန်းရိုးတိအကြားမှာ ရှိရေ၊ အရိုးချပ်ပြားချေ(Spinal disk) ပုံမှန်အနိန်အထားကနိန် ပျက်လားနိုင်ပါရေ။
ကိုယ့်မှာ စာရိုက်လိုင် ဖြစ်နိန် မဖြစ်နိန် ဇာပိုင် စစ်ကြည့်ဖို့လဲ?
ပက်ခုံးတိ လုံးနိန်လာ? အထက်ကို မြင့်တက်နိန်လာ?
လိုင် ရှည်နိန်လာ? ဂေါင်း ရှိကို ငိုက်ကျနိန်လာ?
ခါး အလည်မှာ ကွေးနိန်လာ?
လိုင်၊ ပက်ခုံး၊ နောက်ကုန်း အထက်ပိုင်း ကိုက်ခဲနိန်တတ်လာ?
ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်း လှည့်မရ၊ ပြုမရ တင်းပနာ ဖြစ်နိန်တတ်လာ?
အထက်က အချက်တိ တခုခု ဖြစ်နိန်ပါလာ? မစိုးရိမ်လားပါကဲ့။ အလွယ်တကူ ပြန်တည့်နိုင်ရေ ရရိုးရှရှင်း နည်းလမ်းတိကို ပြောပြပါမေ။
၁) ကိုယ်ဟန်အနိန်အထားကို ဂရုစိုက်ပနာ နိန်ပါ
ရပ်နိန်ချိန်၊ လမ်းချောက်နိန်ချိန် ပက်ခုံးကို အမြဲတမ်း သသက်သသာထားပနာ၊ နောက်ကို ဆွဲဗျာလ် ဖြောင့်ထားပါ
ထိုင်နိန်ချိန်မှာ နရွက်၊ ပက်ခုံး၊ တင်ပဆုံကို တတန်းတည်းကျအောင် ဖြောင့်ထားပါ
၂) အကောင်းဆုံး ကိုယ်ဟန်အနိန်အထားကို ရှာပါ
ကင်ပျူတာကြည့်ကေ မိုနီတာမျက်နှာပြင်အထက်ကနိန် ၃ ပုံ ၁ ပုံ အကွာလောက်ကို မျက်လုံးနန့် တတန်းတည်းထားပါ။ ဖုန်းနန့် တခြားစွာတိကို ကြည့်ကေ မျက်လုံး အမြင့်နန့် အတတ်နိုင်ဆုံး တန်းနိန်အောင်ထိ မြင့်ပနာ ကြည့်ပါ။
ဆက်တိုက် မကြည့်ဘဲ၊ မျက်လုံးကို အဝီးနိန်ရာတိကို လွဲကြည့်ပနာဇီ အားလပ်ချိန်ပီးပါ။
၃) လိုင်ကို ဆွဲဆန့်ပနာ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် လုပ်ပီးပါ
ထိုင်ပနာ၊ လက်နဖက်ကို နောက်ဆန့်ဗျာလ် ချိတ်ထားယင်း၊ မိတ်ကို မပနာ လိုင်ကို အသာအသာ နောက်ကို တိုးပါ
ဝမ်းလျှားမှောက် လဲပနာ၊ ခန္ဓာအထက်ပိုင်းကို တန်းဒေါင်တိနန့် မ,ထားပါ။ အသက်ကို မမျှင်းချေ ရှူဗျာလ်၊ စက္ကန့် ၃၀ ကြာ အသက်အောင့်ထိန်းထားယင်း၊ ပြန်လွှတ်ထုတ်လိုက်ပါ။
ပုံမှန် လုပ်လားကေ ခန္ဓာကိုယ်အနိန်အထား တတည့်မမတ် ပြန်ဖြစ်လားပါလိမ့်မေ။
မူရင်း – Samsung Health က A few tips to save your neck ကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ထားပါရေ။
Previous articleကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၁,၈၇၃ သီရေထဲ ဝူဟန်းဆေးရုံအုပ်ကြီး ပါ
Next articleကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၂,၀၀၉ သီပနာ ၇၅,၁၁၇ ထိ ကူးစက်လာ